လောကဓာတ်လုံးကိုချစ်ရာသခင်သည်မင်းသားဟယ်ရီကနေဝါကျ "လက်ထပ်ထိမ်းမြား" မင်းသမီး Meghan Markle ၏မျှော်လင့်၌တည်ရှိ၏။ ဝတ္ထုအကြောင်းသာတစ်ပါတ်အကြာလူသိများလာတယ်, အတိတ်နှင့်မိန်းကလေးများပစ္စုပ္ပန်ဝီရိယစိုက်လေ့လာခဲ့ကြပါပြီ။ စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်ကျော်ကြားသောမင်းသမီး၏ဘဝအသက်တာကနေ paparazzi အရှုပ်တော်ပုံဖြစ်စဉ်များရှိမရှိရှာပါ?
မင်းသမီး, ဒီဇိုင်နာ, စေတနာ့ဝန်ထမ်း - မင်းသားဟယ်ရီသည်ပြီးပြည့်စုံသတို့သမီး!
စီးရီး "တပ်ဖွဲ့ Majeure" ၏ကြယ်ပွင့် - တက်ကြွစွာဘဝအနေအထားတစ်ခုထောက်ခံသူ, မသာသူမ၏သရုပ်ဆောင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ကုသိုလ်ဖြစ်စီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများ Megan တစ်ခုမှာကိုလည်းဝါသနာဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာရဲ့အဝတ်များစုဆောင်းခြင်းမကြာသေးမီကအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါစတိုးဆိုင်များတွင်ထင်ရှား။ ,
အဆိုးမြင်ပြီးသားခက်ခဲတဲ့ဝေဖန်ရေးနှင့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန် Meghan Markle ဒီဇိုင်းစတင်ခဲ့ပေမယ့်မအောငျမှပါပြီ။ နွေဦး-နွေရာသီစုဆောင်းခြင်းမင်းသမီးတစ်ဦး uncluttered ပေါ့ပေါ့အဝတ်ထုတ်လုပ်ပြီ Reitmans အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး, လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတင်ခဲ့ပါသည်။ မတ်လရောင်းအားခွဲဝေမသာကုမ္ပဏီများ, ဒါပေမယ့်လည်း Megan ယူဆောင်စဉ်ပျမ်းမျှပစ်မှတ်အမျိုးသမီးပရိသတ်အတွက်ဒီစီမံကိန်း, ငွေရေးကြေးရေးအောင်မြင်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဖက်ရှင်ဝေဖန်သူများကမင်းသမီးစျေးကွက်၏ကောင်းတစ်ဦး segment ကို ယူ. , ယခင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဒီဇိုင်နာအဖြစ်ကောင်းမကောင်းအသီးအနှံများအလုပ်အကြောင်းကိုသူကပွောသောငြင်းခုန်။
PR စနစ်-မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး Reitmans တစ်ဦးပါရမီဒီဇိုင်နာနှင့် stylist အဖြစ်, ဒါပေမယ့်လည်းကျော်ကြားအမေရိကန်မင်းသမီးအဖြစ်သာ Megan အပေါ်အကူတိုင်များစိုက်ထူ။ lukbuka မိန်းကလေးရိုက်ကူးတွင်သူမ၏စုဆောင်းခြင်းဆောင် ခဲ့. , Instagram ကိုသတင်း shared:
အဆိုပါ presale ငါ၏အစာရေးဆရာဆေးတောင့်ပေါ့ပေါ့ wear စုဆောင်းခြင်းလက်လွတ်မနေပါနဲ့။ ကျွန်မစိတ်ခံစားမှုအပြည့်အဝဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ကမ္ဘာအတွက်အပျော်ရွှင်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးခံစားရ! "
Megan အဆိုအရအပေါငျးတို့သဖက်ရှင်တွေပျမ်းမျှမိန်းကလေးများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်စတိုင်ငါးဖြည့်စွတ်အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်: အတုသားရေ, ဒြပ်သားရေဘောင်းဘီ, တင်းကျပ်စွာအင်္ကျီတစ်ပိုးအင်္ကျီနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖန်ဆင်း INSERT နှင့်အတူ cashmere poncho ။ မင်းသမီးသည်နှင့်အညီဖြစ်သော, အ 60-70 ဒေါ်လာ, နေ့တိုင်း wear များအတွက်အိုင်အိုဒင်းစျေးနှုန်းအတွင်းထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းအကွာအဝေး။
အခုတော့ Meghan Markle တက်ကြွစွာသင်၏စုဆောင်းမှုမြှင့်တင်ရန်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်။ Instagram ကိုမင်းသမီးထက်ပိုတဲ့သန်းနောက်လိုက်ကတည်းက lukbuka နှင့်အတူဖက်ရှင်နဲ့ဓာတ်ပုံခေါင်းစဉ်အပေါ်ပို့စ်များ, လူမှုကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးပျံသန်း။ မင်းသားဟယ်ရီနှင့်အတူကိစ္စ၏သတင်းကိုသာစာရေးသူရဲ့စုဆောင်းမှုအတွက်အကျိုးစီးပွားကဆက်ပြောသည်။
မင်းသမီး၏အဆိုအရရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအချိန်ဇယားမတိုင်မီကတစ်မိနစ်အားဖြင့်ခြယ်သသည်, ဇန်နဝါရီလအတွင်းကအိန္ဒိယအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်းဖြုန်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူအပြိုင်အတွက်ကြောင့်ပရဟိတ World Vision အနေနဲ့သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။
ပဲရစ်တင်းနစ်အတွက်ပြိုင်ပွဲများတွင်နီကိုးလ် Scherzinger နှင့် Grigor Dimitrov
မင်္ဂလာဆောင်မှ Ian Somerhalder နှင့် Nikki ရိဒ်
ဒါကြောင့်ယခု Adriano အတွက်ပါဝင်နေသည်ထက်?
အဘယ်သူ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပကတိချုပ်ရိုးမှာစိမ်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း Cindy ခရော,
Mick Jagger ၏ရည်းစားမွေးကင်းစသားနဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖြန့်ချိ
နေ့၏ပုံရိပ်ကို: တိုတောင်းတဲ့သားရေစားဆင်ယင်အတွက် Rihanna ပိုမိုပါးလွှာ
Shakira အတူတကွ 8 လအရွယ်သားနှင့်အတူလူမှုရေးအရေးယူပါဝင်ခဲ့
ဟေလာရီ Swank သူမ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုချွတ်ဖျက်လေပြီ
ဘရွတ်ကလင်းဘက်ခမ်းချစ်သော Disneyland ၏ 16 ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အပေါ်ပြုလေ၏
ဂျေမီ Dornan တိုရွန်တိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာသူ့ဇနီး Amelia ဖြစ်တဲ့ Warner ထောက်ခံ
ထုံလက်ဝဲလက်မောင်းနှင့်ခြေထောက် - အကြောင်းရင်းများ
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကို Magic ပဲမျိုးစုံ
Feng Shui အခန်းထဲမှာ
စကိတ်စီးခြင်း၏ skis ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Tom Cruise နဲ့နောက်ဆုံးတော့မိမိသမီးစွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်: အသရုပ်ဆောင်ပင်ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ Suri မြင်ချင်ပါဘူး!
Ftalazol ကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
နွေဦး fertilizing စတော်ဘယ်ရီ
ချမ်းတုန် - အကြောင်းရင်းများ
သားရေဂျာကင်အင်္ကျီ - နွေဦး 2015
Klebsiella - ကုသမှု